Ukuphunyezwa kweSicwangciso soShishino soThutho oluphumeleleyo
Ukuguqulela Umbono Ngezoshishino Zakho Ukuphumelela Ngabaxhasi
Ngoko uye wagqiba ekubeni uqale ishishini lokufundisa kwaye usuvele ucinga ukuba yintoni na ishishini eliya kubonakala ngathi, ngubani oza kuba ngabaxumi bakho, ubuninzi bokuhlawula, kunye nokuba kuphi na ixesha lokumisela iiseshoni zakho zokufundisa.
Ngoku ndikulungele ukuxoxa ngendlela yokusingatha ixesha phakathi kwentetho yakho yokuqala kunye nomxhasi kunye neseshoni yokuqala yokufundisa kunye nomfundi wakho omtsha.
Kwakhona, cinga umfanekiso omkhulu kwaye ucinge iziphumo. - Ziziphi iinjongo zakho ezifutshane kunye nexesha elide lomfundi othile? Kutheni umzali wakhe ekuqeshisela ngeli xesha? Ziziphi iziphumo umzali alindele ukuzibona kumntwana wakhe? Xa abazali bethumela abantwana babo kwizikolo zikarhulumente , ngamanye amaxesha baye banciphisa izilindelwe kuba imfundo ikhululekile kwaye ootitshala baninzi nabanye abafundi ukuba basebenze. Ngokufundiswa, abazali baqhoqhela imali eyimali engqongqo kwimigqi ngeminithi kwaye bafuna ukubona iziphumo. Ukuba banomuvo wokuthi awusebenzi kakuhle kunye nomntwana wabo, awuyi kuhlala ixesha elide njengomfundisi wabo kunye nodumo lwakho luya kubandezeleka. Njalo gcina loo njongo engqondweni ngaphambi kweeseshoni. Nenjongo yokwenza inkqubela ethile ngexesha ngalinye kwiiyure zokufundisa.
Ukuququzelela iNtlanganiso yokuqala. - Ukuba kunokwenzeka, ndingacebisa ukusebenzisa iseshoni yokuqala njengento yokuzifumana kunye nenjongo yokumisela injongo kunye nawe, umfundi, kwaye ubuncinane omnye wabazali.
Thatha amanqaku athile ngexesha le ngxoxo. Nazi ezinye zezinto ofuna ukuxoxa ngazo kule ntlanganiso yokuqala:
Cacisa ukuba abazali bayalindela.
Batsho kancinci malunga neengcamango zakho zezifundo kunye nobuchule bexesha elide.
Cwangcisa iiplani zakho zokuthumela kunye nokuhlawula.
Ukucela iingcebiso malunga nendlela engcono yokusebenza ngayo amandla omfundi kunye nobuthathaka.
Buza malunga naziphi izicwangciso ezisebenzisayo kwixesha elidlulileyo kunye naziphi na ezingazange zisebenze.
Buza ukuba kulungile ukuba uthintane notitshala womfundi ukufumana ingqiqo eyongezelelweyo kunye neengxelo zenkqubela phambili . Ukuba kunjalo, khusela ulwazi loqhagamshelwano kunye nokulandela emva kwexesha elizayo.
Cela zonke izinto ezinokuba luncedo kwiiseshoni zakho.
Qinisekisa ukuba indawo yeseshoni iya kuhlala ithule kwaye iqhuba kakuhle ukufunda.
Vumela abazali bazi into oyifunayo kubo ukwenzela ukwandisa ukusebenza komsebenzi wakho.
Cacisa ukuba ngaba ufanele ubeke umsebenzi wesikolo ngaphezu komsebenzi wesikolo umfundi uya kuba sele efunda esikolweni.
Misela iMigaqo yoMgaqo. - Njengawe eklasini eliqhelekileyo, abafundi bafuna ukwazi ukuba bahlala nani kunye noko kulindeleke kubo. Ngokufanayo nomhla wokuqala wesikolo, xubusha imigaqo yakho kunye nokulindela, ngelixa uvumela umfundi ukuba azi kangako ngawe. Batshele indlela yokusingatha iimfuno zabo ngexesha leeseshoni, ezifana nokuba bafuna isiselo samanzi okanye ukusebenzisa indlu yokugcina. Oku kubaluleke kakhulu ukuba ufundisa ekhaya lakho, kunokuba ngumfundi, kuba umfundi uyisitye sakho kwaye mhlawumbi akanakukhathazeka ekuqaleni. Khuthaza umfundi ukuba abuze imibuzo eninzi njengoko kufuneka. Le ngenye yeenzuzo eziphambili zokufundiswa ngabanye, ngokuqinisekileyo.
Hlalani nigxininisekile nakwimisebenzi yonke imizuzu. Ixesha liyimali ngokufundisa. Njengoko uhamba kunye nomfundi, setha ithoni kwiintlanganiso ezivelisayo apho yonke iminithi ibalwa. Gcina ingxoxo igxile kumsebenzi okhoyo kwaye ibambe iqhosha lomfundi ngokuphendula umgangatho womsebenzi wakhe.
Cinga ukuphunyezwa kweFomu yoNxibelelwano yabazali -Thutheli. - Abazali bafuna ukwazi into oyenzayo nomfundi kwiseshoni kunye nendlela ehambelana ngayo neenjongo ozibekayo. Cinga ukuthetha nabazali ngeveki, mhlawumbi nge-imeyile. Ngenye indlela, unokuthayipha ifomu elifutshane lephepha elibhaliweyo apho ungabhala khona amanqaku anolwazi kwaye umfundi makazise ekhaya kubazali bakhe emva kweseshoni nganye. Xa unxibelelana ngakumbi, abathengi bakho baya kukubona njengobhola-bhola kwaye bafanele utyalo-mali.
Misa i-Tracking kunye ne-Invoicing System. - Ukulandelela ngononophelo nganye ngeyure kumthengi ngamnye. Ndigcina ikhalenda yephepha apho ndibhala khona imihla ngemihla yam yokufundisa. Ndagqiba kwe-invoyisi ngomhla we-10 kwinyanga nganye. Ndafumana itemplate ye-invoyisi nge-Microsoft Word kwaye ndithumela i-invoyisi zam nge-imeyili. Ndicela ukuhlawulwa ngetsheki kwiintsuku ezi-7 ze-invoyisi.
Hlala Ulungiswe kwaye Uya kuhlala Uvelisa. - Yenza ifolda kumfundi ngamnye apho uya kugcina ulwazi lwabo loqhagamshelwano, kunye nawaphi na amanqaku malunga nento oyenzile ngayo, oko usibonelayo ngexesha leseshoni yakho kunye noko uceba ukukwenza kwiiseshoni ezizayo. Ngaloo ndlela, xa iseshoni sakho esilandelayo kunye naloo mfundi esondela, uya kuba nomncinci ukuze wazi apho ushiye khona kwaye kuza ntoni emva koko.
Cinga ngomgaqo wakho wokukhansela. - Abantwana baxakeke kakhulu namhlanje kwaye iintsapho ezininzi zixutywe kwaye zandiswa kwaye azihlali phantsi kohla olufanayo. Oku kwenza izinto ezinzima. Gxininisa kubazali ukuba kubaluleke kangakanani ukuya kwiseshoni nganye ngexesha kwaye ngaphandle kokukhanselwa okuninzi okanye utshintsho. Ndamisela ipolisi yokurhoxisa iiyure ezingama-24 apho ndigcina ilungelo lokuhlawula ireyithi epheleleyo yehora xa iseshoni ikhanselwa kwisaziso esifutshane. Kubaxhasi abathembekileyo abanqabile ukucima, ndingenako ukusebenzisa le lungelo. Kubaxhasi abanenkathazo abahlala bebonakala benesizathu sokuthi, ndinepolisi ephakamileyo yam emva. Sebenzisa isigwebo sakho esihle, vumela indlela ethile, kwaye ukhusele kunye neshedyuli yakho.
Faka iiNkcukacha zoNxibelelwano lwaBathengi kwii-Cell Phone yakho. - Awukwazi ukuba kuza kuvela into kwaye uza kufuneka udibanise nomxhasi. Xa usebenza wena, kufuneka ugcine ukulawula imeko yakho, ishedyuli yakho, kunye naziphi na izinto ezicwangcisayo. Igama lakho negama elikulo mgca. Ukuphatha ibhizinisi lakho lokufundisa ngokunyaniseka nokunyamekela kwaye uya kude.
Ezi ngcebiso zifanele zikhuphe ngokuqala! Ndiyathanda kakhulu ukufundisa kude kube ngoku. Ingikhumbuza isizathu sokuba ndifunde ekuqaleni. Ndiyathanda ukusebenzisana nabafundi nokwenza umehluko. Ekufundiseni, unokwenza iitoni zeenkqubela phambili ezingenayo nayiphi na ingxaki yokuziphatha kunye neendlela zokulawula.
Ukuba uthatha isigqibo sokuba ukufundisa kukuthi, ndinqwenela ininzi inhlanhla kwaye ndiyathemba ukuba zonke ezi cebiso zikuncede kuwe!
Umzekelo Uluhlu lokuHlola lokuTitshala loLwazi
Amanqanaba afanelekileyo wokufumana iYobhi yokufundisa
I-Poetic Thatha kwiBhola
UMaggie Lena Walker: Uphumelele ibhinqa kwiJim Crow Era
Intetho engathethiyo Inkcazo kunye nemizekelo
Ukuhlaziywa kwencwadi yeCrorot Seed Book
"Ezi zinto zikhanya"
Zingaphi Abantu Abafa NgesiXhosa
Ukuvakalisa ubungakanani beeMali ezinkulu
Ukwelashwa kwe-TMJ - Ukusebenzisa i-Reiki kunye ne-Massage Therapy ye-TMJ
I-Intanethi ephezulu ye-intanethi imemela kwi-United Airlines ye-Controversy
I-Dinosaurs kunye Nezilwanyana Zokuqala ZaseRashiya
Yongeza iMidlalo yeqhwa ye-Ice Breaker yeCandelo lakho leDrama
I-Albertus Magnus College Admissions